Mootummaa ce'umsaa Burkiinaa Faasoo irratti fonqolchaan geggeeffame - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home Siyaasa Addunyaa Mootummaa ce’umsaa Burkiinaa Faasoo irratti fonqolchaan geggeeffame
Mootummaa ce’umsaa Burkiinaa Faasoo irratti fonqolchaan geggeeffame
Humni ittisa Burkiinaa Faasaa mootummaa cee’umsaa biyyattii irratti fonqolchaa geggeessuu isaa ifa taasise. Humni woraanaa tankaarfii kana mootummaa cee’umsaa Kanfaadoo irratti kan fudhate filannoo biyyoolessaaf yeroo torbaan lama hafetti.
Sababni fonqolchaa geggeessutti isaan geesse mootummaan ce’umsaa deeggartoonni Kompaawuree filannoo dhufu irratti akka hinhirmaanne dhoorganuu isaanii ta’uu isaa gareen fonqolchaa geggeessan dubbataniiru.
Ummanni Burkiinaa Faasoon fincila geggeesseen mootummaa abbaa irree Bilees Kompaawuree yeroo dheeraadhaaf biyyattii bulchaa ture ari’ee mootummaa ce’umsaatiin bakka buusuun niyaadatama. Angawoonni mootummaa ce’umsaa, prezidaantiifi muummicha ministeraas dabalatee, yeroo kanatti too’annaa jala jiraachuu isaaniiti kan gabaasni gama sanii bayu argisiisu. Qaamni angoo afaan qawweetiin fudhate kuni paarlaamaa biyyattiis bittinsuun isaa beekameera.
Humnonni fonqolchaa adda durummaadhaan geggeessan kunniin harcaatuu mootummaa abbaa irree duraanii, Bilees Kompaawuree, ta’uu isaaniiti kan himamu.
Fonqolchaa Burkiinaa Faasotti ta’e kana mormiin kallattii hedduun isa qunnaati jira.
Previous articleSuudaan Mollaa Asgadoomii fi woraana isaa dabarsitee Itoophiyatti laatte
Next articleFaaydaalee shunkurtii kanniin beektuu?